Lalao Bubble Shooter Tsisy Fiafarana aterineto. Play maimaim-poana
Lalao Bubble Shooter Tsisy Fiafarana an-tserasera
Lalao Online Bubble lalao Funny Games Games ho an'ny ankizivavy Games ho an'ny ankizy Puzzle lalao Puzzle Manan-tsaina On care Efijery kasihina Html5 Android
Teddy - amim-pifaliana no orsa kely izay mipetraka eo amin'ny manodidina ny Fairy Timiliya fanjakana. Ny fiainany rehetra dia te hanorina ny apiary sy ny renitantely -piompiana. Vonjeo vola, dia nividy sombin- tany lehibe teo amin'ny fari-tanin'ny ala. Saingy eto no olana indray mandeha nijanona teo tranainy ponenana ary ankehitriny ny mahery fo mba hanadio ny hoavy fonenan'ny sisa tavela ny trano isan-karazany. Ny rindrin'ny trano fahiny nametraka herin'ny maizina baolina ny loko isan-karazany, ary noho ny fanampian'ny herin'ny maizina iray nitifitra basy izay mitovy foto-kevitra, dia handrava azy ireo. Ny iraka tamin'ny nanaovany ny baolina amin'ny iray andalana izy telo ary avy eo dia hanjavona, dia homenay isa ho azy. Teo amin'ny ankavanana tontonana, isika dia hanana ny safidy ihany koa ny isan-karazany nuclei. Ampiasao amim-pahendrena izy ireo, satria afa-tsy ny mahazatra tifitra dia afaka mitifitra ny tombony baolina, izay novidiny ho anareo accrued hevitra. Amin'ny ambaratonga tsirairay dia sarotra kokoa ny hanaovana azy, ka miezaka ho tsara kajy ny leha ny nitifitra, ary mieritreritra ny ny hetsika rehetra. basy no fehezin'ny ny totozy ary somary tsotra. Tapaka ny Bubble Shooter Tsisy Fiafarana voasoratra ao HTML5 sy ny sehatra vaovao mitovy sary tsara tarehy. Noho izany ianao dia ho afaka hilalao, tsy ao amin'ny biraonao solosaina fa misy kasihina fitaovana. Mametraka ny fampiharana Bubble Shooter Tsisy Fiafarana tena amin'ny toerana tena fitaovana sy hankafy ny gameplay. Ihany koa azo atao ny handray anjara ao amin'ny tompon-daka teo amin'ny mpilalao mipetraka any amin'ny firenena samy hafa. Mba hanaovana izany, manaraka fotsiny ny kely indrindra fisoratana anarana. Ary iza no mahalala, angamba no hiditra an-tampon- mafy mpilalao ny lalao Bubble Shooter Tsisy Fiafarana